Golaha Ammaanka oo isku raacay sharciyo lagu maxkamadeynayo burcadbadeedda – SBC
Golaha Ammaanka oo isku raacay sharciyo lagu maxkamadeynayo burcadbadeedda
Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay ayaa xalay si aqbalabiyad ah u ansixiyay qaraar ku saabsan maxkamadeynta burcad-badeedda Soomaaliyeed ee lagu soo qabto howgallada ka socda Soomaaliya oo ay soo gudbisay dowladda Ruushka.
Qaraarkan ayaa intii aan la ansixin waxaa warbixin ku saabsan burcadbadeedda u akhriyay golaha ammaanka ee wakiilka xoghayaha guud ee Qarammada Midoobay u qaabisan arrimaha burcadbadeedda Jack Lang, iyadoo qaraarka la ansixiyay lagu sharraxay habka looga hortegi karo burcadbadeedda.
Cumar Jamaal oo ka mid ah qunsuliyadda Soomaaliya ee New York oo BBC-da uga warbixiyay qaraarkan la meel mariyay ayaa sheegay inay soo diyaarisay dowladda Ruushka si dhameystiranna loo ay xubnaha golaha ammaanka isugu raaceen.
“Dooddii kulanka intii ay socotay ayaa waxaa lagu soo qaaday waxyabaaha keenay burcadbadeedda, iyadoo la sheegay inay asal u yihiin kalluumeysiga sharci-darrada ah iyo sunta lagu daadiyo biyaha Soomaaliya,” ayuu yiri Cumar Jamaal.
Sarkaalkan ayaa sheegay in golaha ammaanku ay isku raaceen in loo sameeyay biyaha Soomaaliya xuduud, taasoo aan si sharci-darro ah looga kalluumeysan karin, sidoo kalena aan lagu shubi karin sunta kasoo harta Nukliyeerka.
“Qodobbadii hoosta laga xariiqay waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay tahay dal xor ah oo aan lagu xadgudbi karin biyaheeda, xuduudaha badda ee golaha ammaanka uu cayimay waa kuwii hore ee Soomaaliya,” ayuu yiri Cumar Jamaal oo sheegay in sidoo kale la isku raacay in ciidamada badda DKMG ah tababarro la siiyo si DKMG ah ay ugu guuleysato ciribtirka burcadbadeedda.
Dalalka laga sameynayo maxkamada la saarayo burcabadeedda Soomaaliya ee lagu soo qabto howlgalka la dagaalanka burcadbadeedda ayaa waxaa ka mid ah dalka Sychelles iyo dalalka Kenya iyo Tanzania oo la codsaday inay dastuurradooda waafajiyaan in dalalkooda lagu maxkamadeyn karo burcadbadeedda lasoo qabto.
Xubnaha golaha ammaanka ee Qarammada Midoobay ayaa ka dalbaday xoghayaha guud inuu muddo saddex bilood ah kusoo diyaaro warbixin lagu meel marinayo qaraarka ay ansixiyeen ee ku saabsan la maxkamadeynta burcadbadeedda Soomaaliya.